ESI GBANWEE IHE OYIYI NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Ngosipụta foto na Photoshop
Mgbasa ozi na netwọk mmekọrịta bụ VKontakte na-enye gị ohere iwelie ewu ewu nke ibe dị iche iche site n'inweta ndị ọrụ ọhụrụ site na enyemaka nke mgbasa ozi pụrụ iche. Akụkụ bụ isi nke ha bụ ọkọlọtọ. N'ubochi nke ugbua, anyi ga ekwu banyere akuku nile nke eke na itinye mgbasa ozi nke a.
Mepụta ọkọlọtọ VK
Anyị ga-ekekọrịta oge dum nke ịmepụta ọkọlọtọ VKontakte n'ime nzọụkwụ abụọ. Dabere na ihe achọrọ maka nsonaazụ, ịnwere ike ịwụda otu n'ime ha ma ọ bụ jiri naanị aro ole na ole. N'okwu a, a ga-akwụ ụgwọ nlebara anya na ntinye ego, ebe ọ bụ na ihe okike nke ndịna-emeputa bụ, maka ọtụtụ akụkụ, usoro ihe okike.
Nzọụkwụ 1: Mepụta
Mbụ ị chọrọ ịmepụta ihe oyiyi maka ọkọlọtọ na otu n'ime ikike ikikere. Enwere nhọrọ ise:
Obere - 145x85px;
Square - 145x145px;
Nnukwu - 145x165px;
Special - 256x256px;
Ihe ngosi - 560x315px.
Ụfọdụ ụdị mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ịdịgasị iche, nke bụ eziokwu maka posts na mgbidi obodo. Maka nke a, tupu ị rụọ ọrụ na akụkụ kachasị mma, ọ kachasị mma ịmụọ ntụziaka maka ịmepụta mgbasa ozi ma kpebie na usoro mgbasa ozi na-aga n'ihu. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-ekwe omume ịga n'ihu na mmejuputa mmezi ndị ọzọ.
Hụkwa: Ịmepụta ọkọlọtọ maka Mgbakwunye
Nhọrọ nchịkọta kachasị mma maka ọkọlọtọ VKontakte ga-abụ Adobe Photoshop n'ihi ọnụnọ nke ọtụtụ ngwaọrụ ndị na-enye gị ohere ịmepụta ohere ọrụ maka idebe ihe ngosi. Enwerekwa ọtụtụ analogues nke ngwanro a, gụnyere ọrụ ntanetị pụrụ iche.
Otu esi eme banner na ntanetị
Maka mma, ịnwere ike iji mkpebi siri ike, nke ị ga-eji belata tupu ịchekwa.
Dị ka ndabere maka ọkọlọtọ ahụ, ị ​​ga-agbakwunye ihe oyiyi ndị gosipụtara ihe kacha mkpa nke ihe a kpọsara. Tụkwasị na nke ahụ, ụkpụrụ ahụ ga-adị iche iche. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịmepụta ma ọ bụ gradient nwere ọrịa strok.
Ihe a ga-elekwasị anya bụ iji jupụta na wọkspeesi. Ọ bụ ezie na mgbasa ozi maka egwuregwu ma ọ bụ ngwa nwere ike ịgụnye otu oyiyi, ọ ka mma ịkpọsa obodo ma ọ bụ ụlọ ahịa na ihe ngosi nke ngwaahịa a. Ihe magburu onwe ya bụ itinye akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ngwaahịa.
Ọ ga-ekwe omume ịhapụ onwe gị na akara ngosi ụfọdụ na ọdịnaya ederede, na-ekwu ozugbo, ihe mere onye ọrụ kwesịrị iji lebara anya na mgbasa ozi gị.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ịnwere ike ịme ọkọlọtọ ntakịrị ihe mkpasu iwe site n'ịgbakwunye ihe ndị nwere nkwenye na-egbuke egbuke. Nke a bụ ụzọ dị mma isi mee ka ndị ọrụ chee echiche. Otú ọ dị, iji zere nsogbu na nchịkwa ahụ, echefula n'ọdịnihu iji mee ka ndị na-ege ntị gosipụta mgbasa ozi.
Nzọụkwụ 2: Ụlọ
N'ihi eziokwu ahụ bụ na isi nzube VKontakte, nakwa na saịtị ndị ọzọ, bụ ịkwasa ụfọdụ peeji nke, ị ga-enweta ọrụ kwesịrị ekwesị maka nhazi ya. Nke a nwere ike ịchọ itinye ego. N'inwe nkọwa zuru ezu isiokwu a gosipụtara n'isiokwu na-esonụ.
Gụkwuo: Ịmepụta akaụntụ mgbasa ozi VK
Site na isi menu gaa mpaghara ngalaba VK "Mgbasa Ozi".
Ebe ị ga-ahọrọ akara ngosi ahụ na mbinye aka Mgbasa ozi ezubere iche.
Pịa "Mepụta ọkwa"iji gbanwee mgbasa ozi.
Site na nhọrọ ndị a na-enye, họrọ ụdị mgbasa ozi. Dịka e kwuru na mbụ, dabere na nhọrọ ị họọrọ, nha ndị a na-enye ohere nwere ike ịdị iche.
Ntuziaka ndị anyị gosipụtara na-eduzi anyị na njikọ dị n'elu, wepụta mgbasa ozi.
Na ngọngọ "Kere" họrọ otu n'ime ndị dịnụ "Ụdị Ad". Nke a nwere ike mgbe ụfọdụ imetụta ọnụ ụlọ.
Pịa bọtịnụ ahụ "Bulite foto" ma họrọ faịlụ a kwadebere na banner. N'okwu a, ị gaghị eleghara akara ngosi VC anya na mkpebi ntinye na ụdị faịlụ.
Usoro nke ịhọrọ na ibudata ihe oyiyi adịghị iche na usoro yiri nke ahụ na akụkụ nke foto nkịtị.
Hụkwa: Na-agbakwụnye foto VK
Ị nwere ike ịhọrọ mpaghara egosipụtara site na onyinyo ahụ ma ọ bụrụ na ọ kachasị karịa akụkụ ahụ a tụrụ aro.
Mgbe ị na-azọpụta foto
ga-apụta na n'akụkụ aka nri nke mgbasa ozi mgbasa ozi. Ugbu a, naanị gị ga-emecha jupụta n'ọhịa ndị ọzọ ma mee ebe nkwụnye ụgwọ na ịkwụ ụgwọ.
Usoro maka ịmepụta mgbasa ozi ezubere iche maka ìgwè VKontakte, anyị na-atụlekwa dịka o kwere mee n'otu isiokwu dị iche na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Otu esi etinye mgbasa ozi ezubere iche na òtù VK
Mgbe ị gụsịrị ntụziaka anyị, ị nwere ike ịmepụta ngwa ngwa, hazie ma bipụta banner mgbasa ozi na VKontakte. Maka nkọwa nke akụkụ ụfọdụ na isiokwu nke isiokwu ahụ, biko kpọtụrụ anyị na ihe ndị dị n'okpuru ebe a.